Maraykanka oo sheegay in Soomaaliya halis wajahayso iyo qorshihiisa.
September 14, 2021 Xuseen 3
Agaasimaha Sirdoonka Qaranka Maraykanka Avril Hanes ayaa hadalkaasi ka sheegtay Shirka sanadlaha ee Amniga iyo Sirdoonka ee 2021 oo lagu qabtay magaalladda Washington DC.
Kulankaasi waxaa isku soo duway Ururka Isgaarsiinta iyo Elektroonikada ee Ciiddanka Hubeysan iyo Isbahaysiga Sirdoonka iyo Amniga Qaranka dalka Mareykanka.
Agaasimaha Sirdoonka Qaranka Maraykanka, Avril Hanes oo Shirka kaga qeyb gashay Aaladda Fogaan Araga ayaa waxaa ay tiri: “Cabsida ugu sareysa ee Argagixisada ee Xilliga ma aha dalka Afganistan, balse waxaan aad u arkaa inay Khatarta ka soo fool leedahay dalalka Somalia, Yemen, Syria, Iraq iyo Kooxda Daacish, waa sida ay hadalka u dhigtay.
Waxay sii raacisay Cabsida Koowaad ee Argagixisada ma aha Afganistan ee waxa ay Hay’addaha Ammaanka iyo Sirdoonka si gaar ah indhaha ugu hayaan khataraha Argagixisada ee Maraykanka uga imaan kara dhowrka dal ay farta ku fiiqday ee kala ah Somalia, Yemen, Syria, Iraq iyo Kooxda Daacish ee ISIS.
Dowladda Maraykanka waxay horey u sheegtay in Kooxda Daacish-ta Afganistan ee ISIS-K tahay Khatarta weyn ee ay ugaarsan doonaan, kadib, markii ay weerar Is-qarxin ah bishii hore August 26-dii la geysteen Garoonka Diyaaradaha Hamid Karazai International Airport ee ku yaalla Caasimada dalka Afganistan ee Kabul, iyadoo weerarkaasi lagu dilay 170 qof oo ay 13 ka mid Askar Maraykan ahaayeen.
Ninkan rooble laxabay waligii
Mausan arag maamul dowli ah
Bad ayuu ku dhex dhacay
Markaan fiiriyo qaabkiisa
Waa nin anxiety qabo waa xanuun dhanka maskaxada ah hadii
Aad fiiriso jirkiisa waxaad
Arki kartaan dhibka kamuqdo jirkiisa
Waa nin ujilcan ajanabiga
Waana nin lagu qaldi karo dhaldhalaal
Been ah lagu jiidankaro
Waa nin hadii aan laga hortagin somalia ku calinkaro
1991 tusaloyn gaagaban
Kenya somalia dhulkeda ayay
Bobaysaa in uu lahashiyo
Mahayen 2 masar Ethiopia
Ayaa dhib kala dhaxeeyaa
Oo somali bay rabtaa in aay
Dagagaal galiso in uu aado
Lahashiiyo mahayen sacuudi
Waan ognahay 80milion in uu kadiiday farmaajo laakii
Xogta aan hay 10milion buu
OgalaadY rooble mida cajibka
Ah inuu ciidamDii gacanta
Lagalo waa tusaale nagufican
Maxaa talo ah somali
Ninkaas sumaysan gacan bir ah laguqabto barlamanka
Hafadhisto ayagaa horay mandate usiyay kalalabta
Cidamaduna waa in aay difacan
Si awood ah qabilkii isku dayo dagaal waa in cashir
Lodhigaa anagoo kalaharin
Because yeeli mayno
In aan ku noqono 1991
Cajiib itoobiya in badda lasoiyo waa sax miyaa dadka iyo dalka in lasiiyo waa sax qaadka itoobiya waa dawo miyaa kan kiiyanah sun itoobiya walaaleheen miyaa kiinyanah cadow farmaajo waa nin cafimaad qaba oo wadniyah miyaa kkkk warka isii iii waran oo hadanah ii waran
Abdullahi Elmi says:
Arinto ma aha,sida aad wax u sheegayaan,labadii a fadhi ku dirirka ah.
Raiisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble,arinta
Ikraan Tahliil Faarax,waxaa shaqo ku keh maxkamada oo waa in ka baaro oo ka dibna ka soo bandhigo wixii dhacay waa arin sharci.
Arimaha doorashada oo uu xilsaaranyahay qaarna ay dhamaadeen,kuwana socdaan,waa kuwa aqalka sare.
Waa in xildhibaanada aqalka hoose si dhaqsa ah loo bilaabo.
Marka waa in dhabta ah ee jira laga hadlo.
Soomaalido waa in aysan noqon kuwo laga kee iyo dad ta guud.
Musharixiinta waxaa la gudboon in ay muujiyaan biseel siyaasadeed,oo aysan noqon sida,website yada beelaha ee ay qoraan dad aan ahayn ,wariyaal sax ah,laakiin iska dhiga,waa ay badan yihiin.
Soomaaliya guul iyo horumar,cadaalad iyo in sharcigo oo sareeyo.
Xiisad saaka ka taagan furimaha dagaalka iyo ciidamadii ugu badnaa oo ka baxay G Mudug.